South Korea nwere ihe dị ka 260 puku ndị ọrụ 5G | Gam akporosis
South Korea enweela ihe dị ka ndị ọrụ 260 puku 5G
South Korea Ministry of Science and ICT akọrọla isi data nke nnabata ọhụrụ nke teknụzụ 5G na mba ahụ.
Ihe ndia gosiri ụfọdụ ndị debanyere aha 260,000 abanyela na netwọk 5G nyere site na ndị ọrụ atọ na-arụ ọrụ na mba ahụ.
Mgbanwe ngwa ngwa nke South Korea iji mee ngwa 5G na akụrụngwa maka azụmahịa nwere nsogbu ụfọdụ maka ndị na-eburu ụzọ, ndị mere mkpesa banyere njikwa esemokwu na esemokwu na ekwentị 5G mbụ nke mba ahụ. Galaxy S10 5G si Samsung. Agbanyeghị, ndị ahịa agafela ọsọ ọsọ iji dozie nsogbu ndị mbụ ahụ.
N'ime onwe ha, ha enyego ike siri ike iji dọta ndị ahịa ọhụrụ ngwa ngwa teknụzụ dịpụrụ adịpụ. Agencylọ ọrụ gọọmentị kpughere na a na-agwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkwupụta sitere n'aka ndị na-azụ ahịa. Ozi ICT chọpụtakwara na, na ọtụtụ ndị ọzọ na-eji usoro a, a na-atụ anya ka nsogbu dị iche iche ga-achọ mkpebi.
O doro anya na ntinye nke 5G abughi ihe kwesiri ntukwasi obiebe ọ bụ na a ga-enwerịrị ebe mgbakwasị ụkwụ na ngwaọrụ zuru ezu iji mejuo ọnụ ọgụgụ buru ibu. Ndị a bụ nsogbu ịma aka nke na-eche ndị na-ebu US na ihe karịrị nde mmadụ 328 ka ha jee ozi. Ọnụ ọgụgụ ndị South Korea, nke e mere atụmatụ na nde 51.3, erughị otu ụzọ n'ụzọ isii nke United States, na mbara ala mba ahụ ji okpukpu 99 dị obere.
N'agbanyeghị ihe mgbochi, Mmejuputa netwok 5G nke South Korea ji nke nta nke nta na-agbanwe. N'ihe dị ka n'izu a, ndị ọrụ South Korea nwere ihe karịrị 54,200 5G base base n'ofe mba ahụ, elu 7% site na izu gara aga. Ha elekwasị anya na ịgbasa, ngwa ngwa na mfe, ntinye nke sistemụ ha na maapụ ịntanetị.
Oppo Reno 5G bu ama mbu Europe nke 5G di
Maka ugbu a, mba ahụ lekwasịrị anya na obodo ndị mepere emepe dị mkpa na mpaghara ndị ọzọ bi na ya. Agbanyeghị, a na-atụ anya ka sistemụ ahụ gbasaa ọzọ n'afọ abụọ na-esote.
Na mmepe metụtara ya, onye ọrụ Switzerland Swisscom na nso nso a kwupụtara ụfọdụ atụmatụ ịmalite ọrụ elebara anya nke njikọta 5G, nke ga - eme Switzerland Switzerland mba Europe izizi iji mejuputa ya. Mba ahụ ọkara nke South Korea ma nwee otu ụzọ n'ụzọ isii nke ndị bi na South Korea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » South Korea enweela ihe dị ka ndị ọrụ 260 puku 5G
Ndụmọdụ iji gbochie ekwentị gam akporo gị na-ekpo oke ọkụ
LG V50 ThinQ 5G enweela ụbọchị ọ ga-ewepụta ya